Ikamelo elincane nelinethezekile enkabeni ye-Barcelona - I-Airbnb
Ikamelo elincane nelinethezekile enkabeni ye-Barcelona
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Rosa
Ikamelo lokulala elincane nelinethezekile elinakho konke okudingayo ekuhlaleni kwakho e-Barcelona. Ikamelo lise-Vila de Gràcia, enendawo enhle kakhulu. Ihlotshisiwe ukwakha isimo sokuzola nokuzola ezivakashini zayo.
Iyisicaba iseduze ne-Diagonal/Paseo de Gracia, ibheke imigwaqo i-Gran de Gracia ne-Sant Doménec. Iyisicaba esikhanyayo (cishe yonke ingaphandle), enamabhalikhoni omphakathi abheke umgwaqo i-Gran de Gracia ne-Sant Doménec.
Inendawo ka-150 m2. Kunamakamelo angu-2 aqashisayo.
Ifulethi lise-Gracia, indawo enobuntu obuningi, enkabeni ye-Barcelona. E-Gracia unamasevisi amaningi, zombili izitolo zazo zonke izinhlobo (kuningi okuhlukile) njenge-yoga, izikhungo zamasiko, njll. Siphinde sibe amamitha ambalwa ukusuka e-Paseo de Gracia ne-Diagonal, ngakho-ke ungahamba ngezinyawo ukuya enkabeni yedolobha nasezindaweni ezinomsebenzi wezomnotho, wamasiko nobuciko owengeziwe e-Barcelona.
Ukuze siqinisekise ukuhlala okunethezekile nokuthula, sizotholakala nganoma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka onakho mayelana nedolobha noma indlu; Ungathintana nami ngocingo noma ekhaya, ngoba ngihlala eduze kakhulu nefulethi, futhi phakathi nesikhathi ngizoba nezikhathi eziningana, ukuqinisekisa ukuthi konke kunjengoba sisungule futhi ukuze kuhlangatshezwane nemithetho yendlu.
Ukuze siqinisekise ukuhlala okunethezekile nokuthula, sizotholakala nganoma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka onakho mayelana nedolobha noma indlu; Ungathintana nami ngocingo noma…